किन हुन्छ अंग्रेजी हाउगुजी ? - Baikalpikkhabar
किन हुन्छ अंग्रेजी हाउगुजी ?
अंग्रेजी फरर बोल्न जान्ने तर व्यावहारिक जीवनका धेरै पक्ष थाहा नभएकाहरू पनि धेरै छन् । सहर र आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारमा हुर्केकाहरूले मोबाइल, इन्टरनेट, कम्प्युटर चलाउन पोख्त हुन्छन् र देश–विदेशका घटनाहरूका बारे पनि छिटै जानकारी पाउँछन् । तर आफ्नै भाषा–संस्कृतिका राम्रा कुराहरू भने त्यति थाहा पाउँदैनन् । आजकल हाम्रो समाज आधुनिकताको लहरमा यतिसम्म बहकिसक्यो कि, विदेशी चाडपर्व आउनु महिनौंअघि सहर–बजारमा चहलपहल देखिन्छ । महिनौंअघिदेखि नै होटल, रेस्टुराहरूले ‘डिस्काउन्ट अफर’ हरू झुन्डिएका हुन्छन् । यसरी अंग्रेजीमोह र विदेशी चाडपर्वप्रतिको लगावका कारण हाम्रा चाडपर्वहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
हालैको भेटघाटमा मेरी एक साथीले आफू अंग्रेजीमा कमजोर हुँदा भोग्नुपरेको कठिनाइ सुनाइन् । उनले कुनै संस्थाको कार्यक्रममा बोल्नुपर्ने थियो । उनीभन्दा अघिका वक्ताहरूले अंग्रेजीमा प्रस्तुति दिएका रहेछन् । उनले भने अंग्रेजी र नेपाली मिसाएर कनीकुथी बोलिछन् । उनले भन्न खोजेको कुरा अरूको तुलनामा कमजोर थिएन, तैपनि अरू सहभागीले उनले बोलेको कुरामा टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अंग्रेजीमै प्रस्तुति दिनुपर्थ्यो भनेछन् । भाषा माध्यम मात्र हो । हो, हामीले आफ्नोबाहेक अन्य भाषा आवश्यकताअनुसार बुझ्न र बोल्न जरुरी छ तर त्यसो भन्दैमा अंग्रेजी बोल्न जान्ने मानिस बढी जान्ने भन्न अलि नमिल्ला कि !
एसईई, प्लस टु, स्नातक वा अन्य तहको नेपाली विषयबाहेकको परीक्षामा अंग्रेजीमा लेखे बढी नम्बर आउने विद्यार्थीहरू सुनाउँछन् । कतिपय शिक्षकले नेपालीको तुलनामा अंग्रेजीमा लेखिएका उत्तरहरूलाई बढी नम्बर दिने गरेका छन् । नेपालीमा राम्रै लेखे पनि कम नम्बर पाएको गुनासो विद्यार्थीहरूले सधैं गर्छन् । लोक सेवा वा त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षामा समेत अंग्रेजीमा सामान्य उत्तर लेखे पनि पास भइन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसैले गर्दा ग्रामीण भेगबाट आएका विद्यार्थीहरू सहरी परिवेशमा आफूलाई कमजोर महसुस गर्न पुग्छन् । सहरमा वर्षको लाखौं खर्च गरेर पढेका विद्यार्थीहरू र गाउँमा घाँसदाउरा गर्दै पढेकाहरूबीच केही फरक त भै नै हाल्छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै गाउँमै बस्छ । गाउँका विद्यालयको संरचना र पढाइ सहरका निजी विद्यालयको तुलनामा कमजोर छ ।
शिक्षा देश विकासको आधार हो । सरकारले सबैले सहज, सरल र गुणस्तरीय शिक्षा पाउन क्षेत्रगत आधारमा विशेष नीतिनियम ल्याउनु जरुरी छ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा एउटै पाठ्यक्रम भए पनि फरक–फरक भाषामा पढाइन्छ । नेपालीमा पढेर सहर आएकाहरूलाई भाषाकै कारण यहाँको समाजमा घुलमिल हुन गाह्रो भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै सहरका भन्दा ग्रामीण परिवेशमा हुर्केका बालबालिकामा आदर, सत्कार, मेलमिलाप र सहयोगको भावना बढी पाइन्छ ।
अंग्रेजी फरर बोल्न जान्ने तर व्यावहारिक जीवनका धेरै पक्ष थाहा नभएकाहरू पनि धेरै छन् । सहर र आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारमा हुर्केकाहरूले मोबाइल, इन्टरनेट, कम्प्युटर चलाउन पोख्त हुन्छन् र देश–विदेशका घटनाहरूका बारे पनि छिटै जानकारी पाउँछन् । तर आफ्नै भाषा–संस्कृतिका राम्रा कुराहरू भने त्यति थाहा पाउँदैनन् । आजकल हाम्रो समाज आधुनिकताको लहरमा यतिसम्म बहकिसक्यो कि, विदेशी चाडपर्व आउनु महिनौंअघि सहर–बजारमा चहलपहल देखिन्छ । महिनौंअघिदेखि नै होटल, रेस्टुराहरूले ‘डिस्काउन्ट अफर’ हरू झुन्डिएका हुन्छन् । यसरी अंग्रेजीमोह र विदेशी चाडपर्वप्रतिको लगावका कारण हाम्रा चाडपर्वहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् । हाम्रो भाषा–संस्कृति लोप हुने अवस्थामा छ । यदि हाम्रो चाडपर्व, वेशभूषा दिन–प्रतिदिन यसरी नै ओझेलमा पदै जाने हो भने हाम्रो अस्तित्व नै नरहन पनि सक्छ । त्यसैले पहिचान जोगाउन हामी हरदम तत्पर हुनुपर्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर पसेकाहरूलाई अंग्रेजी हाउगुजी नै बन्ने गरेको छ । उनीहरूलाई विद्यालय, क्याम्पस वा कार्यालयमा अंग्रेजी राम्रोसँग नजान्दा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । आजकल जति नै गरिब भए पनि बुबाआमाको सपना छोराछोरीलाई अंग्रेजी भाषा फरर बोल्न सिकाउने विद्यालयमा पठाउने हुन्छ । यसैलाई बुझेर निजी विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पढाइदिन्छु भनेर अनावश्यक निकै शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । अंग्रेजी माध्यमको ‘ट्याग’ लगाएर अभिभावकलाई बढी शुल्क तिर्न बाध्य पार्नु हुन्न ।
शनिबार, २२ फागुन, २०७७, बिहानको १०:०६ बजे